झलक जितेपछि के गर्ने भईन् तेरिया ? |
झलक जितेपछि के गर्ने भईन् तेरिया ?
23 January, 2017 | Bhawana Pathak | 830 Views | comments
रुपन्देही रुद्रपूरकी तेरिया फौजा मगर झलक देखलजा सिजन ९ जितेपछि मिडियामा छाएकी छिन् । १४ बर्षकी तेरियाले झलक जितेर ३० लाख भारतीय रुपैयाँ र एउटा रेनल्ट कार आफ्नो नाममा गरेकी छिन् । झलक देखलाजाको फिनालेमा उपस्थित अभिनेता ऋतिक रोशनले उनको नृत्य हेरेपछि आफू स्पिचलेस भएको बताएका थिए । तेरियाको नृत्य मन पराएका उनले तेरियालाई आफ्नो सिनेमामा अवसर दिने कुरा पनि व्यक्त गरे जसले अहिले निकै चर्चा पाएको छ । ऋतिकको कुरा सुनेर तेरिया निकै खुशी हुँदै आफ्नो बलिउड ड्रिमको बारेमा कुरा गरेकी थिईन् ।
झलक जितिसेकपछि तेरियाको के गर्ने योजना छ ? भनेर अहिले धेरै मिडियाहरुले सोधिरहेका छन् । यसको जवाफमा तेरियाले अब के गर्ने आफैलाई पनि थाहा नभएको बताउँदै आएकी छिन् । तर तेरियाले आफूलाई अवसर मिलेसम्म बलिउडमा काम गर्न मन भएको भने बताएकी छिन् । बलिउडमा आफूलाई मन पर्ने अभिनेत्री शोनाक्षी सिन्हा हुन् भन्दै तेरियाले उनीसँग काम गर्ने आफ्नो ठूलो सपना भएको बताएकी छिन् । एजेन्सीसँग कुराकानी गर्दै तेरियाले भनेकी छिन्, ‘म सानै देखि बलिउड टि भि हेरेरै हुर्केकी हुँ । मलाई बलिउड एकदमै मन पर्छ । यदि बलिउडमा मलाई काम गर्ने मौका मिल्यो भने म अवश्य गर्नेछु ।’
झलकबाट तेरिया बीचमै बाहिरिएकी थिईन् । तर उनको भाग्य उनले फेरि वाईल्ड कार्डबाट प्रवेश गर्ने मौका पाईन् । वाईल्ड कार्डबाट प्रवेश गरेकी उनले आखिरमा शो जितेरै छाडिन् । यसरी वाईल्ड कार्डबाट शो जित्ने कमै हुन्छन् । तर तेरियाले वाईल्ड कार्डबाट प्रवेश गरेर पनि सो जित्ने रेकर्ड राखेकी छिन् ।रुपन्देहीमा जन्मेकी तेरिया बिगत केही बर्ष यता आमा, बुबा र दिदीसँग मुम्बईमा बस्दै आएकी छिन् ।
#झलक जितेपछि के गर्ने भईन् तेरिया ?